Ixesha kudibana iqabane umphefumlo, kwaye ixesha kwaye atyikitye
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Ixesha kudibana iqabane umphefumlo, kwaye ixesha kwaye atyikitye
Xa udibana iqabane umphefumlo ngalinye enye ezitsalwa umphefumlo, kuxa sele waziva ombala omnye komnye. Elo xesha lo ke umahluko phakathi kwabanye abantu, abanye abantu nazo ngaphambili kakhulu, thina abantu abahlangabezana kwimizuzu embalwa omdala.
Ukongeza, ukuba kukho naxa umntu uyazi intuition nokuba iqabane umphefumlo, kuba ngamanye amaxesha akunjalo, enyanisweni, akukho ngaphantsi ityala ukuba akukho waphawula wahlangana nto.
Oko kuthethiweyo, kukho into ezifana kusenokwenzeka ixesha kuhlangana iqabane umphefumlo, oko kuthiwa abaninzi ekujikeni ingongoma ubomi bomntu. Abantu ndadibana ngelo xesha ke umntu othe waba ithuba ukuba batshintshe indlela yobomi, ngaba kusenokwenzeka ukuba iqabane umphefumlo.
iqabane umphefumlo ukuzama ukubamba uphawu ukuhlangabezana umphefumlo iqabane kuye kwakhona wathi kukho uphawu olunentsingiselo. Yintoni oza kuyenza kwi uphawu wayo. Njengoko kuchaziwe kwisahluko esingaphambili
ingongoma ? Wabaguqukela, kusenokwenzeka uphawu olukhawulelana iqabane umphefumlo xa ubulisa zaguquka ubomi bam. Umzekelo, ekwahlukaneni nokuqeshwa kunye umhlala-phantsi ixesha, umthandi, ezifana xa kufikwa ukuhlala andazi ilizwe, xa bume itshintshile ukuya ngoku wayedla na ixesha layo.
ukuba babenolwazi uqhagamshelwano phakathi kwabantu
ngoku ukuba wadibana iqabane umphefumlo, kukho kwakhona amathuba kubantu endadibana ngokunxulumene nabantu emhlabeni na iqabane umphefumlo. Ubuhlobo nabantu, ijonge okanye siphumo Ekuhlanganeni, efana asilindelanga ukuba ngokwam. Esazi yokudityaniswa enjalo, ukuba ukuba nditsale, kusenokuba kukhubeka enqumla iqabane umphefumlo naliphi na ithuba.
? eyakhayo iimvakalelo zomsebenzi
kunye nobomi xa sele wagaleleka, ngokuqinisekileyo umngeni into ngokwakho Naxa imvakalelo sele wagaleleka ukuba imiqulu ithuba wakho ukuba kudibana iqabane umphefumlo. Xa
umphefumlo izele lwamandla, ungenza ukutsala iqabane umphefumlo uzive ombala. Neemvakalelo usebenze nzima ukuze yonke into, xa iimvakalelo Kuye kwamiswa ukuba ufuna ukutshintsha ezabo ukuza kuthi ga ngoku, ke isiqaqa ukuhlangana nabantu.
ixesha ukuhlangabezana into
iqabane ebalulekileyo umphefumlo ukuze bangaphoswa ukujonga ixesha sisiganeko lula-to-ukuqonda kakhulu njengoko kuchaziwe apha ngasentla. Oko kuthethiweyo, ukuba akukho ukuqonda ukuba uthanda iqabane umphefumlo, loo nto kwakhona abonwe oko.
Ngoko ke, kwempixano i-eriyali isoloko ikhangela iqabane umphefumlo, makhe ndikuphaphele uvakalelo ukubamba ingqiqo xa kuye kwabonakala ukuba umdlali phambi kwamehlo. Kwaye ngaphezu nantoni, kubalulekile ukuba achithe yonke imihla yokuba amandla entle.